अर्को ठुलो शो ‘लोक स्टार नेपाल’ आजदेखि सुरु। कमेन्ट गर्नेले विजेतालाई स्मार्टफोन उपहार
स्वास्थ्य / यौन
ट्रेलर / टिजर
नेपालको ठुला रियालिटी शो मध्ये अर्को रियालिटी शो पनि थपिएको छ। लोक गायनका क्षेत्रमा आफ्नो भाग्य खोजिरहेका हरुका लागि नया ठुलो मौलिक रियालिटी ‘शो’ ‘आईएमई नेपाल लोक स्टार’ सुरु हुदैछ। यो शो आज देखि एपी वान र रमाइलो टिभीबाट प्रशारण शुरु हुने भएको छ । गायन रियालिटी शोमा अहिले सम्म रहेका ठुला शो नेपाल आइडल र भोइस लाइ टक्कर दिदै यो शो पनि सुरु हुन लागेको हो।
आज बिहिबार देखि सुरु हुने हरेक बिहिबार र सुक्रबार राति साढे ८ बजे देखि एपी वान र रमाइलो टिभीमा रियालिटी ‘शो’ ‘आईएमई नेपाल लोक स्टार’ हुदैछ। यो शोलाइ टिभीका अलावा युट्युबाट समेत लाइभ हेर्न सकिने छ । युट्युब लाइभ स्ट्रिममा प्रथम ५० भित्र कमेन्ट गरि सेयर गर्ने दर्शकलाइ उपहारको समेत ब्यबस्था गरेको छ। कमेन्ट गर्ने पहिलो ५० मध्ये का एक जनालाई कार्यक्रमले कलर्स वानई स्मार्टफोन उपहार प्रदान गर्नुका साथै दुईवटा प्रत्यक्ष ‘शो’ हेर्ने अवसर दिने छ।
यस्तो छ स्मार्टफोन जित्ने तरिका
मेगा अडिसनबाट छानिएका १०९ प्रतिस्पर्धीबाट २५ जना स्थापित गर्ने शोमा पुग्नेछन् । मेगा अडिसनका सातवटा श्रृंखलापछि स्थापित गर्ने एउटा श्रृंखला हुने अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिएका हुन् । उत्कृष्ठ १० सम्म निर्णायकको ५० प्रतिशत र भोटिङको ५० प्रतिशतका आधारमा प्रतिस्पर्धी छनोट हुनेछन् । उत्कृष्ठ १० बाट ८० प्रतिशत दर्शक र २० प्रतिशत निर्णायकको भोटका आधारमा प्रतिस्पर्धीको छनोट हुनेछ । फाइनलसम्म ८०/२० कै आधारमा छनोट हुनेछ । उत्कृष्ठ पाँचबाट फाइनल भनिनेछ । फाइनलमा छनोटको सबै अधिकार दर्शकको भोटमा रहनेछ ।
कार्यक्रमको ३६ औं श्रृखंला फाइन हुने यस कार्यक्रमका बिजेताले कर सहित नगद रु ५० लाख रुपैयाँ पाउने छ भने दोस्रो हुनेले २५ लाख र तेस्रो हुनेले १० लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन ।
यस सिजनमा टप ५ हुने सबैले ७ वटै प्रदेशमा ‘नेपाल लोक स्टार’ले कन्टसर्टमा आफ्नो प्रस्तुति देखाउने छन् । छ । लोक भाका मात्र गाईने यस शो मा जयनन्द लामा, रामजी खाँड, बिबि अनुरागी, सुनिता दुलाल जज का रुपमा रहेका छन्।
यो खबर पनि हेर्नुहोला
कतार जान कामदारलाई एक पैसा नलाग्ने बनाउदै सरकार ! म्यानपावर धाउनु नपर्ने
क्रसरले खनेको खाल्डोको पानीमा डुब्दा बालिकाको मृत्यु ...
दुलाहा दुलही पल र आँचल, जग्गेमा लजाउदै आचल......भिडियो
खुसि हुदै रुपाले बाडिन कृष्ण ओलीको यस्तो भिडियो ! लेखिन केहि बिशेष……..भिडियो
इराकमा रोजगारी भन्दै यसरि ठगिए , महिलामाथि आक्रमण गर्दै हिँड्ने ४ जनाको भिडियो – सिधा कुरा ( भिडियो )
काठमाडौंको मखनमा महिलामाथि आक्रमण गर्ने गिरोहको सिसिटिभी भिडियो ‘सीधा कुरामा’
Previous Article चर्चित लोक गायिका एवं सभासद कोमल ओलि अस्पताल भर्ना
Next Article एसईई परिक्षा दिएकि नायिका करिश्मा मानन्धरको यस्तो छ नतिजा
One Comment on “अर्को ठुलो शो ‘लोक स्टार नेपाल’ आजदेखि सुरु। कमेन्ट गर्नेले विजेतालाई स्मार्टफोन उपहार”
Shrawan Aarya says:
June 27, 2019 at 10:12 pm
Congratulations for opening lok star nepal show….
नेपाल आइडल रबि ओडको नया गीत सार्बजनिक ……… हेर्नुस भिडियोमा
बुद्धको जन्मभूमिमै अज्ञात समूहद्वारा रुपन्देहीमा बुद्धमूर्ति तोडफोड
बिहिबारका दिन जन्मिएको मान्छेको भाग्य यस्तो हुन्छ ! हेर्नुस जानिराख्नुस
आज राति दुर्लभ खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै , यी चारवटा राशीको भाग्य फेरिदै | कसलाई कस्तो प्रभाव – हेर्नुस
गलबन्दीकि चर्चित मोडल अन्जली अधिकारी प्रहरीको ड्रेसमा………. हेर्नुस भिडियोमा
भद्रगोलमा भित्रिइन मुन्नी , एकै भागमा चर्चित हुने को हुन् मुन्नी ? हेर्नुस भिडियोमा
हेर्नुस आजको दिन कस्तो छ ? आज २९ असार आइतबार तपाइको भबिस्यबाणि
कुन राशि भएका पुरुषहरुले पाउछन् सुन्दर श्रीमती ! यस्तो छ शास्त्रमा जान्नुस
बाढीपहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३२ पुग्यो, २१ बेपत्ता ! २ हजार बढीको उद्धार,
कोशी नदीमा पानीको बहाव यो बर्षकै उच्च , काेशी व्यारेजका ३७ ढाेका खाेलियाे
धेरै हेरिएको खबर
ठुलो सहयोग बोकेर शिशिर भण्डारी बिदेशी जेलमा रहेका बिनोद रानाभाटको घर पुगे……. हेर्नुस भिडियोमा
जापानमा नेपाली कामदार लैजाने तयारी, रोजगारीको लागि भाषा परीक्षा हुँदै
कक्षा १० का बिद्यार्थीले बनाए एटीएम मेशिन, यसरि निकाले पैसा ( भिडियो सहित )
विदेशिक रोजगारीको डिमाण्ड अनलाइनबाट यसरि खोज्नुस , म्यानपावर धाउनु नपर्ने
प्रकाश सपुत र अन्जली अधिकारिको अभिनयमा नया गीत सार्बजनिक……..भिडियो हेर्नुस